ဒီဇင်ဘာလ 20, 2019 အားဖြင့် HOTMAIL255aComment ချန်ထား
ချင် Outlook နဲ့အကောင့်ကို Create? ထိုအခါဤဆောင်းပါးကိုသင်တို့အဘို့ပြည့်စုံမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုထောက်ပံ့ပေး Outlook နဲ့အကောင့် Up ကို Sign. သင်ဤ Outlook နဲ့အကောင့်ကိုသုံးပြီး get အများအပြားအားသာချက်များရှိပါသည်, ဒါကြောင့်ငါသည်သင်တို့ကိုသင့်ကိုယ်ပိုင် Outlook နဲ့အကောင့်ကိုဖန်တီးအကြံပြု.
ငါရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူပါတယ်ခြေလှမ်းများနှင့်အတူဖန်တီးဤဆောင်းပါး. သင်ဒီမှာတရားဝင်က်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်လည်းမရ, သငျသညျတစ်နေရာတည်းတွင်အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုရနိုင်အောင်. အောင်မြင်စွာမှဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းခြေလှမ်းဖြစ်စဉ်ကိုအားဖြင့်ခြေလှမ်းကိုလိုက်နာပါကဖြည့်စွက် သင့် Outlook နဲ့အကောင့်ကို Create.
ဒါကြောင့်, သငျသညျထိပ်ကနေအောက်ခြေရန်အလွန်ဂရုတစိုက်ဒီမြေတပြင်လုံး post ကိုထွက်ကြည့်ရှုရန်ရှိသည်. ထိုအခါကိုလိုက်နာ Outlook နဲ့အကောင့်ကို Create မှခြေလှမ်းများ အလွယ်တကူ. သင်ဤ Up ကို Sign ဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ရန်မီအပြီးကြည့်ရှုရန်ရှိသည်ထားတဲ့အချို့သောအခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုရှိပါတယ်.
Microsoft Outlook အဆိုပါ Microsoft Office suite ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ရရှိနိုင်မယ့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များမန်နေဂျာဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်မကြာခဏအီးမေးလ်တစ်စောင်လျှောက်လွှာအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်. ဒါဟာအစပြက္ခဒိန်ပါဝင်သည်, task manager ကို, အဆက်အသွယ်မန်နေဂျာ, မှတ်စုဆည်းပူးနေ, ဂျာနယ်, နဲ့ web browsing အတွက်.
တစ်ခုဖန်တီးပြီးတဲ့အခါသူ့ရဲ့သငျသညျအရအင်္ဂါရပ်ကဘာတွေလဲ Outlook နဲ့အကောင့်ကို? ဒါကြောင့်, အောက်ကဖော်ပြထားထုတ်စစ်ဆေး5နောက်ဆုံးပေါ် features တွေ သင်ဤ Outlook နဲ့အကောင့်ကို အသုံးပြု. မရ.
ပိုကောင်း bcc စီမံခန့်ခွဲမှု
Android အတွက် Office ကိုမှန်ဘီလူး
Outlook နဲ့အကောင့်ကို Create | အဆင့်လုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်အဆင့်
အဆင့်များကိုလိုက်နာအောင်မြင်စွာဖို့အောက်ကဖော်ပြထားခြင်း Outlook နဲ့ Up ကို Sign. တိုက်ရိုက်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရိုက်ထည့်ဖို့ခြေလှမ်းများမှာဖော်ပြထားတဲ့တရားဝင်က်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ကိုသုံးပါ.
ပေးထားသော Outlook နဲ့တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ: www.outlook.com
ယခု, ထို option ကို click “အခမဲ့အကောင့် Create” အဆိုပါသင်္ကေတပြ Up ကိုဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ရန်.
ဒီစာမျက်နှာတွင်, သငျသညျသစ်ကိုအီးမေးလ်ဝင်နှင့်လည်းဒိုမိန်းကို select ရန်ရှိသည် @ outlook.com သို့မဟုတ် @ hotmail.com နှင့်စာနယ်ဇင်း “နောက်တစ်ခု”.
ပြီးနောက်, သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုများ၏ password ကိုရိုက်ထည့်ပါနှင့်နှိပ် “နောက်တစ်ခု” ကြယ်သီး.
ယခု, ဤနေရာတွင်သင်ကအာကာသထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်စာနယ်ဇင်း၌သင်တို့၏ပထမအမည်နှင့်နောက်ဆုံးအမည်ကိုထည့်သွင်းရန်ရှိသည် “နောက်တစ်ခု”.
ယခု, သင်ပိုင်နိုင်ငံ / တိုင်းဒေသကြီးကို select နှင့်လည်းသင့်ရဲ့မွေးဖွားခြင်းရက်စွဲနှင့်စာနယ်ဇင်းကို select ရန်ရှိသည် “နောက်တစ်ခု”.
နောက်ဆုံး, ဒီစာမျက်နှာပေါ်တွင်သင်ဂရုတစိုက်သင်ပေးထားသောအာကာသအတွင်းကိုတွေ့မြင်ဇာတ်ကောင်ဝင်နှင့်နှိပ်ဖို့ရှိသည် “နောက်တစ်ခု” ကြယ်သီး.
ရုံဂရုတစိုက် on-screen ကိုညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာနှင့်သင့် Outlook နဲ့ Inbox ထဲမှာမှထည့်သွင်း.
သင်အထက်ပြဿနာအသုံးပြုခြင်းကြံ့ခိုင်တဲ့စကားဝှက် CREATE သေချာ, Lower ပြဿနာ, ဂဏန်း, နဲ့အထူးအက္ခရာဟက်ကာများမှသင်၏ခန့်မှန်းချက်အကောင့်အားကာကွယ်ရန်.
၏အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖော်ပြချက်အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုထုတ်စစ်ဆေး Outlook နဲ့ဖောက်သည်စောင့်ရှောက်မှု. မည်သည့်စုံစမ်းမှုအဘို့, သင်ဖော်ပြထားခြင်းနံပါတ်များပေါ်တွင်ခေါ်နိုင်ပါတယ် 24/7.
သေဆုံးသူ-အခမဲ့ :- 1800 572 1100 /1800 102 1100 , သေဆုံးသူ-Pay ကို :- 080 4010 3000
၏လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအချက်အလက်တွေအားလုံးကိုရဖို့ရန်ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါ Outlook နဲ့အကောင့်ကိုဖန်တီးနည်း. ခြေလှမ်းလမ်းညွှန်အားဖြင့်ခြေလှမ်းထွက်စစ်ဆေးပြီးမှအောင်မြင်စွာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ် Outlook နဲ့အကောင့် Up ကို Sign. လည်း, သင့်ရဲ့ Outlook နဲ့ account ဖန်တီးပြီးပြီးနောက်သင်ရရှိသည့်အင်္ဂါရပ်များကိုဖတ်ရှု.
အောက်ကဖော်ပြထားမှတ်ချက် box ကိုသုံးပြီးသင်တုံ့ပြန်ချက်နှင့်မေးမြန်းချက် Give. ကျနော်တို့သင်သည်သင်၏တုံ့ပြန်ချက်ဝေမျှမယ်ဆိုရင်တကယ့်ကိုကြေးဇူးတငျကွောငျးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သင်ဖို့အကောင်းဆုံးဆောင်းပါးပေးလို. နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု www-hotmail-com.email ပုံမှန် update ဘို့ရန်.
အောက်မှာ Filed: ဆိုင်းအပ် အတူ Tagged: အလားအလာအကောင့် Create, အလားအလာဖန်တီးရန်မည်သို့မည်ပုံ, အလားအလာအကောင့် sign up ပြုလုပ်